ktmkhabar.com - बालेनको नयाँ शिक्षा नीतिः निजी स्कुलका मालिक तनावमा !
बालेनको नयाँ शिक्षा नीतिः निजी स्कुलका मालिक तनावमा !
काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ प्रमुखको ईन्ट्री भएपछि विचौलिया र भ्रष्टहरुको निद हराम नै भएको छ । हरेक क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गती हटाउन तल्लीन बालेनले नयाँ नयाँ योजना ल्याइरहेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले उक्त रकम विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि खर्च हुने बताए । यस्तै, महानगरले जीवनपयोगी शिक्षालाई जोड दिने नीति लिएको मेयर शाहले जनाए ।